Rapid ကိုလှည့်စားမယ် — MYSTERY ZILLION
August 2009 edited March 2010 in Rapidshare Account
ကျနော် rapid ကိုလှည့်စားဖို့လုပ်ကြည့်တယ်။ ရသွားပြီ။ သူက account တစ်ခုကို login နှစ်ခု တစ်ပြိုင်တည်းပေးမ၀င်ဘူး။ အဲဒါကို ဒီလို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။
ကျနော့် rapid အကောင့်ကို ဘော်ဘော်တစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ IDM (Internet Download Manager) လေးရဲ့ option လေးထဲက site login ဆိုတာလေးထဲမှာ link, user name, password တွေကိုဖြည့်ထားတယ်။ နောက် ဒီဆိုက်ကနေ (http://rapidshare-search-engine.com) လိုချင်တဲ့ file ကိုရှာတယ်။ တွေရင် link ကို ကော်ပီကူး၊ IDM မှာ Add URL ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် ပြီးတော့ download လုပ်တော့တာဘဲ။ အဲဒီ့နည်းနဲ့ နှစ်ယောင်ပြိုင်တူသုံးနေတယ်လေ။ နှစ်ယောက်ထက်ပိုရင် တော့ ရမလား မရဘူးလာတော့ မစမ်းရသေးဘုူး။ ကျနော်သိသလောက် MZ member တွေထဲက Rapis Account ရှတဲ့သူတွေကတော့ ကိုစိုင်း၊ ကိုဘလက်၊ ကိုယောင်စိန်၊ ကိုရသာ နဲ့ ၀က်ကားလေး တို့တော့သိတယ်။ (ဖွလိုက်ပြီ )
တကယ်ဘဲ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ ့ပြည် ့စုံတဲ့မင်းသားလေးပါလား ။ Ordinary Member ကနေ
Jump Promotion တက်ပေးမှ ဖြစ်တော ့မယ် ။ သည်တော့....
MZ မှာ ၀န်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပုံ အသစ်ရေးဆွဲပြီး Mr Prince ကို Chair Man နေရာပေးရင် သင့် ့တော်မယ်ထင်တယ် ။ ဒါမှ MZ လည်း > > > > > >
ထောက်ခံပါတယ်။ ထောက်ခံပါတယ်။ ထောက်ခံပါတယ်။ (လူဦးရေ လေးထောင်နှင့် ညီမျှသော အော်ဟစ်ထောက်ခံသံ :d)
ထောက်ခံသူများ အကျယ်ကြီး သုံးခါ အော်ပါ................
အကျယ်ကြီး.............. အကျယ်ကြီး................ အကျယ်ကြီး................
နာသာ ကုလာထိုင်လူကြီးဖြစ်ရင် MZ ကပိုစ့်တွေအကုန်လုံးကို print ထုတ်ပြီး MZ Collection ဆိုပြီး နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်းထုတ်ရောင်းစာမယ်။ နောက် MZ က မော်ဒယ်တွေကို ပြက္ခဒိန်ရိုက်ပြီး ရောင်းစားမယ်။ :D ) )
နောက်ပိုင်းမှာ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ရက်ပစ်ရဲ့ ပရီအကောင့်တစ်ခုကို ဘုံအနေနဲ့ သုံးလို့ရအောင် လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ လောလောဆယ်ဆယ် လူအများကြီးသုံးလို့ရ မရ ကို စမ်းနေဆဲမို့ပါ။ ဒါကြောင့် ပါ၀င်းစမ်းသပ်ပေးကြတဲ့ ကိုရသာ၊ ကိုစိုင်း၊ ကိုေ၀ယံတို့ကလည်း အဆင်ပြေ မပြေကို ပြောပြကြပါ။ ဒီ result က ဂွတ်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကူးထားသလို တင်ပေးပါ့မယ်။ :39:
အကိုရေ cookies ပျောက်နေတယ်ခင်ဗျ
Document and setting ပီးတော. user ထဲမှာ cookies မတွေ.ဘူး...
ဘာကြောင့် cookies folder ကိုရှာလို့မရတာလဲမသိဘူး...ရှင်းပြပါဗျာ....
ကျနော်က အကို share ပေးထားတဲ့ auslogic boostspeader လေးနဲ့တော့ မကြာမကြာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဗျ....
ပီးတော့ IDM portable နဲ့ ဘယ်လို link လုပ်ရမှာလဲ ဗျ....
ကျနော်. မှာ အကိုပေးထားတဲ့ IDM full version crack file တော့ရှိတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့ ဒေါင်းတာတော်တော် အဆင်ပြေတယ်.....portable တော့မရှိဘူး...
တလက်စတည်း hide IP platinum ကိုဘယ်လိုသုံးရသလဲဆိုတာသင်ပေးပါခင်ညာ...
Desktop ပေါ်က icon ကို double click လုပ်ရုံပဲလားခင်ဗျ?
မေးရတာ အားနာတယ်ခင်ဗျ..ဒါပေမဲ့ rapid ကဒေါင်းချင်တာတွေရှိလို့ပါ...
ကို branaung ရေ
ကျနော်လည်း ဖြေရမှာ အားနာတယ်ဗျ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော် software လေးတွေ share ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျနော်သုံးဖူးတဲ့ ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ home page တွေကရတဲ့ information လောက်ကိုပြန်ပြောတာပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်အနေနဲ့ တင်တော့တင်ပေးပြီး သေသေချာချာ ပြန်မဖြေနိုင်လို့ အရမ်းကိုအားနာမိပါတယ်။ ကျနော သေချာစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဗျ။
အဲဒါဆို address ကနေ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဥပမာ - C:\_Documents and Settings\_Administrator\_Cookies ဒါဆိုရင် cookies ကိုမတွေတော့သော်လည်း ရပါတယ်။
IDM portable နဲ့ လင့်လုပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလည်းခင်ဗျား။ ကျနော်သိပ်မရှင်းလို့ပါ။
browser နဲ့ချိတ်တာကိုပြောတာဆိုရင်တော့ မပူပါနဲ့။ Portable လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလို addon ကိစ္စ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ ပါတဲ REG file လေးကို run ဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်။ အဲဒါမှ လိုင်စင်ဖြစ်မှာ။
ကျတော် မနေ့ကသုံးတာအစဉ်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ... ဒါကြောင့် ဒီနေ့လဲဆက်သုံးနေပါတယ်... နောက် လဲရတဲ့အထိဆက်သုံးတော့မယ်နော် ကို ပုရင့်.... :D:D
ကျတော်က IDM မသုံးပဲ Giagaget သုံးပါတယ်ဗျာ.. အကောင့်ဒါရိုက်ထဲ့ထားရင် ရပါပြီ... ဒါပေမဲ့ တစ်ခု အကြံပေးချင်တာက IP မတူတဲ့နေရာတွေကနေ အကောင့် တစ်ခုထဲနဲ့ ဝိုင်းသမနေရင် Rapaid ကသိမယ်ထင်တယ်... သူလဲ လုပ်စားလာတာကြာပြီဆိုတော့.... ပါ့ဝါ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုပြောနော် ကိုပုရင့် :D:D ..
ကျတော် ဆွဲကြည့်တဲ့ ပုံစံကဒီလိုပါဗျာ...
ကျနော်လည် အဲဒါကို စိုးရိမ်နေမိတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် အရင်က စမ်းသပ်တုန်းကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အခုလည်း Testing ကာလလို့သဘောထားပြီး များများဆွဲကြည့်စေချင်တယ်။ ဘမ်းခံထိတော့လည်း ကုသိုလ်ကံပေါ့ဗျာ။
အာ စိတ်သာချ........ မနက်ဆို ၈ နာရီက နေ ညနေ ၅ နာရီအထိ....... R.p တွေပဲ ရှာဒေါင်းတာ.... 512 တောင်မှ ဂျီတော့ မတက်နိုင်အောင်ကို idm နဲ့ဆွဲတာ...... စိတ်သာချ.... စမ်းနေတယ်.......... စမ်းနေတယ်........ ဟဲဟဲ.......
ခနခန ဒေါင်းနေရမှာနဲ့ နောက်ပြီး စိတ်ချရအောင် iso တွေပဲရှာပြီးလွှတ်ပေးထားတယ်စိတ်ချ.... အဲ့လောက်ဒေါင်းနေတာမှမဘန်းရင် .... :d:d:d
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လို့ပြောရမလား။ ကျနော့်ရဲ့ ဒီပိုစ့်မှာ တောင်းထားတဲ့ Fiel ကို ကျနော်ပြန်တင်ပေးဖို့ dl လုပ်တယ် မရဘူးဒ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်ကြိုးစားတယ်။ မရဘူး။ တစ်ခုခုတော့ဖြစ်နေဘီလို့ထင်လိုက်တယ်လေ။ ဒါနဲ့ကျနော်လည်း အခြားတစ်နေရာက ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်မှသိလိုက်တာ အဲဒီ့ file လင့်ကို ကိုရသာကလည်း ဒေါင်းနေတာကိုး။။။။။။။:D
ဒါချို.... ဒတိ ငပိ အကောင့်တစ်ခုထဲက သမနေတာဖစ်တဲ့အတွက်.. တစ်ဖိုင်ထဲ တစ်ကြိမ်မှာ နှစ်ယောက်မဆွဲရ.... :d:d:d မဘန်းခင်လေးတော့ ဆွဲနေတယ်နော်... :d:d:d
(ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်)n
(အကျယ်ကြီး အကျယ်ကြီး အကျယ်ကြီး) n
n = 1 nano time
ကိုကို သားသားထောက်ခံထားတယ်နော်။ ကိုကိုတို့စမ်းလို့ရရင် သားကိုလဲမျှနော် သားမှာလဲချစရာတွေ(download ကိုပြောပါတယ်)ရှိလို့ပါနော် ကိုကိုနော် (ဖားတာ)
ကျွန်တော်သိသလောက် နဲနဲဝင်ပြောမယ်နော် ၊RS acc: တစ်ခုတည်းကို IP တစ်ခုတည်းကနေဒေါင်းရင်မဘန်းပါဘူး၊ သူ့ limit ကျော်သွားရင်သာဒေါင်းလို့မရတော့တာပဲရှိတာပါ ။IP ၄/၅ ခုလောက်ကဝိုင်းသုံးရင် အကောင့်ကိုပိတ်ပစ်ပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် ဖရီးပေးစမ်းထားတဲ့ Member ခြောက်ယောက်ရှိပါတယ်။ အကောင့်ကတော့ ဒီတစ်ခုတည်းပါ။ အဲသူတို့ခြောက်ယောက်ကလည်း နေရာမတူနိုင်ပါဘူးဗျာ။
တယ်ဟုတ်ဗျ browser နဲ့ IDM ကိုချိတ်တာဘာ...
ကို Prince ပြေါတဲ့အတိုင်း စမ်းလိုက်အိုးမယ်..
အဲ....ကျွန်တော်ပြောတာတော့လိုသွားတယ်ဗျ.....ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာက IP မတူတာတွေက နိူင်ငံအသီးသီးကပါ ။ တစ်နိူင်ငံတည်းက IP မတူတာကို ban တာတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဖူးပါဘူး ၊ သိလည်းမသိပါဘူး၊ max: ဘယ်လောက်ထိလက်ခံလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျမသိပါဘူး။ အခု အစ်ကိုက RS ကနေ ဒေါင်းလို့ရနေသေးတယ်ဆိုတာက.....
(၁) various IP တွေက တစ်နိူင်င ံတည်းကဖြစ ်နေ၍ သော်၎င်း ၊
(၂)သတ်မှတ်ထားတဲ့ IP အရေအတွက်ကို မကျော်သေး၍သော်၎င်း၊
(၃)RS site က check လုပ်မကြည့်ရ၍သော်၎င်း ၊
ဒေါင်းလို့ရနေသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ RS acc: အပိတ်ခံရတာကျွန်တော် ခဏခဏ ကြုံဖူးပါတယ် (အကောင့်တွေက ုိforum တွေကနေ အလကားရ လို့:D)။ ကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒုတိယအချက်နဲ့တတိယအချက်တွေကြောင့်အစ်ကို့အကောင့်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာတွေကို ပြောပြတာပါ။
ဟုတ်မယ်ဗျ... ကျတော်လဲ ဝိုင်းစမ်းပေးနေတာပါ ကိုပုရင့်ကို ဒါပေမဲ့ ကျတော် တို့ လက်ရှိ အိုင်ပီ သုံးခုရှိတယ်ဆွဲနေတာ.... တစ်ခုက 203 . xxx.xxx.xxx
နောက်တစ်ခုက 222.xxx.xxx.xxx. နောက်တစ်ခုက 116.xxx.xxx.xxx
လောလောဆယ်တော့အဲ့သုံးခုစလုံးက သမနေတာရနေတယ်ဗျ.... :D:D နောက်ထပ် နောင်တော် ပုရစ်ဘယ်သူတွေကိုထပ်ပေးထားသေးလဲမသိဘူး... :D:D:D မဘန်းခင်တော့ တမထား ဗျို့...... :P:P:P
ကိုကျော်မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ IP Trace ဆိုက်တစ်ခုခုကနေ ကြည့်လိုက်ရင် တွေ့ရမယ့် IP က ISP ရဲ့ IP ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့က Local တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေလို့ ဘမ်းခံမထိတာ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ RP ကနေ IP Limit လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိ်ပါခင်ဗျား။ ကဲဒီတော့ RP အကောင့်ကို ဒီတစ်လ အတွင်း သုံးချင်တယ်ဆ်ိုရင် (ပြည်တွင်းအတွက်သာ) ကျနော့ဆီကို PM (သို့) Email သာပို့လိုက်ပါ။ ကျနော်ပြန်ပေးပါ့မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ အများသုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောထားတဲ့ နည်းနဲ့ဘဲ ဆွဲကြပါ။ မူလဆိုက်ကို လော့ကင်မ၀င်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေ။ နောက်တစ်ခုက လိုကယ်သမားများအတွက်လို့ပြောရတာက (၁) လိုကယ်မှနေ၍ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူမရရှိခြင်း (၂) လိုကယ်မှ အသုံးပြုနေသူများသာရှိခြင်းကြောင့် လိုကယ်မှမဟုတ်သူများအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲစေချင်ပါတယ်။:39::39:
ကျနော့် rapid အကောင့်ကို ဘော်ဘော်တစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ idm (internet download manager) လေးရဲ့ option လေးထဲက site login ဆိုတာလေးထဲမှာ link, user name, password တွေကိုဖြည့်ထားတယ်။ နောက် ဒီဆိုက်ကနေ (http://rapidshare-search-engine.com) လိုချင်တဲ့ file ကိုရှာတယ်။ တွေရင် link ကို ကော်ပီကူး၊ idm မှာ add url ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် ပြီးတော့ download လုပ်တော့တာဘဲ။ အဲဒီ့နည်းနဲ့ နှစ်ယောင်ပြိုင်တူသုံးနေတယ်လေ။ နှစ်ယောက်ထက်ပိုရင် တော့ ရမလား မရဘူးလာတော့ မစမ်းရသေးဘုူး။ ကျနော်သိသလောက် mz member တွေထဲက rapis account ရှတဲ့သူတွေကတော့ ကိုစိုင်း၊ ကိုဘလက်၊ ကိုယောင်စိန်၊ ကိုရသာ နဲ့ ၀က်ကားလေး တို့တော့သိတယ်။ (ဖွလိုက်ပြီ :d)
ကို ပရင့်.. ဘာလို့ အဲလို အကြံဆိုး အဲ..အဲ..ကောင်းကောင်းလေးတွေ တွေးမိဘာလိမ့်နော်...:39::39: အာဗွား..အာဘွား..:67::103:
ပုရင့် နင်ထုတော့နာ့ကို အတဲခွဲပီပေါ့လေ..... (:((:((:((
ရက်ပစ်ကို ဗြင်းနေတယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့။
ကျနော် ကို Nano နဲ့ ရက်ပစ်ကြောင်းလေးတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ ပြောဖြစ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ သူပေးတဲ့ information ပါဘဲ။ ကျနော်တို့ Rapid ကနေ download ဆွဲဖို့ဘဲ သိကြတယ်။ ပြန်တင်ပေးဖို့မေ့နေကြတယ်လေ။ အဲဒါကို Rapid က ပြန်တင်ကြဖို့ ဆွဲဆောင်ထားတယ်ဗျ။ အဲဒီ့ Information ကို ကျနော်လည်း ကိုNano ပြောမှဘဲ သိတော့တယ်။
ဒီလိုဗျ။ ကျနော်တို့ Free အကောင့်ကဘဲဖြစ်ဖြစ် ပရီအကောင့်ကဘဲဖြစ်ဖြစ် upload တင်၊ ပြီးရင် အဲဒါကို (upload တင်ထားတဲ့ ဖိုင်) download ဆွဲတဲ့ limit တို့ File Size တို့ပေါ်မူတည်ပြီး point သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ အဲဒီ့ point တွေ 10000 ပြည့်ရင် ကိုယ့် ရက်ပစ်ကို Free extend လုပ်လို့ရပြီတဲ့ဗျ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ရဲ့ ရက်ပစ်အကောင့်လေးကို ဖရီး Extend တိုးရအောင် ကျနော် ရက်ပစ်ကနေ အပ်လုပ်တင်ထားတဲ့ link တွေချပေးမယ်ဗျာ။ အကယ်၍ အဆင်ပြေခဲ့ရင် ......................................................
I'm testing now. :P
Your RapidShare Premium account 9935439 (princeakarit) will expire in7days.
MB in use: 8
Free RapidPoints: 20000
Premium RapidPoints: 0
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် 31 ရက် August လ 2009 ရက်တွင် ကျနော် share ပေးသုံးထားသော ယင်းအကောင့်အား password ခေတ္တခဏ ပြောင်းမယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် 1 ရက် စက်တင်ဘာလ 2009 ရက်နေ့တွင် ယခင် password/user name ဖြင့်ပင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါက အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
thar thar wrote: »
ဘာကို ထောက်ခံနေတာလည်းဗျ။ :2::2:
Acutally rapidshare can log all of your download activity over the ip address.even u download from IDM but there isaip for outgoing port.rapidshare will be ban your account if there isadifferent 16 network account in one account within 24 hours or4concurrent connection per account
Yes, Ko princeakarit,
I already share with my RS account with my friend like u said in above.But had to be aware of download limit that usual accounts has limit of 5GB per days and 75 GB per month. If u want to remove the limit, u have to pay more
Ys, correct, but Rs give first day 5Gb and next day they add additional and how much can you download per day ? i mean i download one day minimum 5Gb (download movies) and they give more quota, now i can download maximum one day 22.35 Gb if you not enough next day they will add more... no need to pay more, same as usual price..